८ हप्ताको शिशुले पितालाई भने – हेलोः सबैभन्दा कम उमेरमा बोल्ने बच्चा हुन् त ? – NawalpurTimes.com
८ हप्ताको शिशुले पितालाई भने – हेलोः सबैभन्दा कम उमेरमा बोल्ने बच्चा हुन् त ?
प्रकाशित : २०७७ भदौ १८ गते १०:५२
८ हप्ताको शिशुले आफ्नो पितालाई हेलो भनेर सबैलाई अचम्मित पारिदिएका छन् । चार्ली नाम दिइएको उक्त बालक सबैभन्दा कम उमेरमा बोल्ने संसारको पहिलो बच्चाको रुपमा हेरिएको छ । बेलायतका निक र क्यारोलिन आफ्नो सन्तानको पहिलो बोली यति कम उमेरमा सुन्दा निकै उत्साहित भएका छन् ।
सोसल मिडियामा प्रकाशित भएको भिडियोमा निकले आफ्नो छोरालाई हेलो भनिरहेका छन् । बच्चाले आफ्नो बुवाको बोली फर्काउन निकै कोसिस गर्छ । पछि बालक हेलो भन्न सफल हुन्छ र पटक पटक दोहोराउँछ । भिडियो बालककी आमा क्यारोलिनले सुट गरेका हुन् ।
क्यारोलिन भन्छिन्, ‘हामी उसको भिडियो बारम्बार हेरिरहन्छौं । हामीलाई गर्वको अनुभव भइरहेको छ । हाम्रो छोरा यो उमेरमा पनि बारम्बार मुस्कुराइरहन्छ । साधारणतया बच्चा १० देखि १४ महिनाको उमेरमा बोल्न सुरु गर्छन् । हाम्रो अर्को छोराले नै ६ महिनामा बोल्न सुरु गरेको थियो । ’